Amathrendi Wokukhangisa Ngezindaba Zomphakathi ZaseHholide Ka-2014 | Martech Zone
NgoMgqibelo, Septhemba 27, 2014 NgeSonto, Septhemba 28, 2014 Douglas Karr
Kubukeka sengathi lesi kuzoba yisikhathi esikhulu samaholide kuFacebook, lapho 92% yabathengisi balindele ukuchitha iningi lesabelomali sabo sokumaketha umphakathi! Sekukonke, abathengi kulindeleke ukuthi basebenzise imali engaphezulu kwama-8% kulo nyaka kunalokho abakwenze ngonyaka odlule - ama- $ 650 billion. Futhi abathengisi babheka ezenhlalo ngokuphelele njengomthombo oyinhloko wokunweba imakethe yabo!
Isikhathi sokumaketha samaholide sika-2014 sesifikile! Uma ufana nathi, usuvele ugcwele ngokugcwele uhlela imikhankaso yakho yamaholide. Ngakho-ke kungani ungathathi isinyathelo emuva uphinde uhlole ukuthi abanye abathengisi bacabangani ngalesi sikhathi samaholide kwezenhlalo? Funda ukuthi abathengisi batshala imali kuphi, yimaphi amanethiwekhi aqhamukayo njengabadlali bamandla, ukuthi iziphi izinhloso eziyinhloko zabakhangisi zezenhlalo nokuningi. URob Manning, i-Offerpop
I-Offerpop isebenzisa le infographic ukukhahlela uhlelo olusha lwe-imeyili lapho abathengisi bekwazi khona bhalisa bese uthola ugqozi lokumaketha ngezikhathi ezithile kubhokisi lakho lokungenayo. Uchungechunge lokuqukethwe lwamahhala luzohlinzeka ngamathiphu edijithali nawomphakathi kanye nezitayela odinga ukuzazi ngeBlack Friday nangaphezulu. Thola i-infographics, imibiko yocwaningo, izinhlelo zokumaketha, bheka izincwadi, nokuningi, unyaka wonke.
Tags: amathiphu we-digital marektingukumaketha kwe-ecommerceucwaningo lwe-ecommerceamathiphu we-imeyiliamathiphu amaholideizitayela zamaholideukunikelaukuphanga ukuphathwaamathiphu wokumaketha ezokuxhumamathiphu omphakathi